Keydka Guryaha ee Xiaomi - SmartMe
Dom » Ku keydi qeybta 'Xiaomi Home'
Halkee laga iibsadaa iyo intee le'eg Mi Band 6? Kooxda Xiaomi waa la heli karaa!
Waxaad dalban kartaa qalabka cusub ee Xiaomi hadda. Ma fileynin in si dhakhso leh loo soo bandhigo, maadaama qalabka horay loo soo bandhigay bilowga Juun iyo Julaay. Aad ayaan u faraxsanahay waxaanan horeyba u aadaynaa dukaamaysiga! Xagee laga iibsadaa ...